काठमाडौं फन भ्यालीले कर छलेपछि राजश्वले मार्यो छापा, पौडी पोखरीमा दुषित पानी ! - नेपालबहस
काठमाडौं फन भ्यालीले कर छलेपछि राजश्वले मार्यो छापा, पौडी पोखरीमा दुषित पानी !
काठमाडौं । सूर्यविनायक नगरपालिका–१० पलाँसेमा सञ्चालित काठमाडौं फन भ्याली कम्पनीले लाखौँ रुपैयाको कर छली गरेको पाइएको छ । कम्पनीको नाममा बिल काट्नुपर्नेमा नक्कली बिल काटेर कर छली गरेको पाइएको हो ।
काठमाडौं फन भ्यालीको नाममा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको उक्त कम्पनीले कर छली गर्न विद्यालयहरुलाई भने उक्त कम्पनीको बिल नदिई कर छली गर्दै ‘वाटर वल्र्ड ट्रेडर्स प्रालि’ को नाममा लाखौँ रुपैयाँको बिल काटेर कर छली गरेको समाचार स्रोतको दावी छ । दोहोरो बिल बनाएर व्यापक रुपमा कर छली गरेको पाइएपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालयले छापा मारेको छ ।
फन भ्यालीले सयौँ विद्यालयका हजारौँ विद्यार्थीलाई दर्ताबिनाको नक्कली बिल दिएर लाखौँ रुपैयाँ कर छली गरेको उजुरी परेपछि राजश्व कार्यालयले उक्त कम्पनीमा छापामारी कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको हो । आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख सूर्यप्रसाद पोखरेलले आज यसबारे जानकारी दिँदै कार्यालयमा उजुरी आएपछि काठमाडौं फन भ्यालीका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर छानबिन शुरु गरिएको बताए ।
फन भ्यालीका प्रवक्ता लक्ष्मण गिरीले भने कर कार्यालयले कागजपत्र लिएको स्वीकार्दै कर छली नगरेको दाबी गरे । काठमाडौं फन भ्यालीले प्रदूषित पानी राखेको र स्थानीय सार्वजनिक जग्गासमेत मिचेर दुरुपयोग गरेपछि यसअघि सूर्यविनायक नपा–१०ले समेत कारवाहीका लागि पत्राचार गरेको थियो ।
काठमाडौं फन भ्याली
अघिल्लो लेखउच्च शिक्षाका लागि विदेशीने विद्यार्थीमाथि अर्थमन्त्रीले थोपरे कर
अर्को लेखकाठमाडौंमा बिहानैदेखि बर्खे झरी, एक–दुई स्थानमा ठूलो पानी पर्ने !
मदिराको अवैध बिक्रीबाट राजश्वमा १२ करोडको घाटा